Momba anay - Fujian Golden Bambu Industry Co., Ltd.
dia naorina tamin'ny 2011 ary mandrakotra velaran-tany 133 400 metatra toradroa. Ny orinasa dia miorina ao amin'ny tanànan'i Nanjing, tanàna Zhangzhou, faritanin'i Fujian izay toerana tsara indrindra amin'ny fitomboan'ny volotsangana. Orinasa vaovaon'ny asa vaventy sy orinasa mpanao asa vaventy miaraka amin'ny iraka "mampiroborobo ny fizotry ny fiarovana ny tontolo iainana manerantany ary mampihena ny fanjifana ny harena voajanahary"
Mpamorona ambony 11
REBO (Fujian Golden Bamboo Industry Co., Ltd) dia manam-pahaizana manokana amin'ny R&D, famokarana, ary marketing amin'ny volavola vita amin'ny volon'ondry vita amin'ny volony, gorodona, rindrina mitaingina rindrina, soavaly mitaingina soavaly, andry, joist, fefy, sns.
Nahazo vokatra saika Patanty famoronana nasionaly 100 sy patanty azo ampiharina, ary manana Faharetana kilasy 1, fampiasana kilasy 4, fihetsiky ny afo Bfl-s1, fenitra Fehy Fehydehida E1, fankatoavana ny fanoherana ary ampiasaina betsaka amin'ny zaridaina, zaridaina, hotely, sekoly, trano sy birao, fananganana tetikasa sns.
REBO dia natokana ho an'ny fanamboarana sy fanavaozana ny hazo fisaka ary tanjona amin'ny filozofia maintso sy mahasalama ary mahasalama. Noho ny faharetan'ny durabiIity, fiarovana sy ny fananana ara-batana hafa, ny volotsangana vita amin'ny kofehy dia fanoloana WPC tena tsara sy voajanahary hazo the